Mhlawumbe, ama-comedies abasha ngokuthandana nekolishi yizona ezithandwa kakhulu emhlabeni wonke. Emva kwakho konke, amandla abo, ukukhanya nokulingana kuzowina wonke umuntu. Amaqhawe amahle nezindaba ezithakazelisayo ngeke eze ukunambitha hhayi kuphela kubantu abasha, kodwa nangesizukulwane esikhulile.
Kuphephile ukuthi amafilimu anjalo athandwa kakhulu nabaqondisi baseMelika. Njengoba ababukeli abaningi bethanda ama-comedies abasha mayelana nothando kanye nezindaba ezingcolile mayelana nentsha, ekhululekile ekukhathaleleni okukhulu kwabazali bayo, baqala ukwenza "izenzo ezihlukahlukene" zobuqili. Isibonelo, abanye abafundi bayashesha ukulahla ubuntombi babo ngokushesha, abanye "bahlukane" emaphathini nabangani, kanti abanye bahlala beqinisile kubo futhi basebenza kanzima ekutadisheni. Futhi ukubuka abalingiswa be-charismatic kuyamangalisa kakhulu ukuthi ufuna ukubuka lezi movie ngokuphindaphindiwe.
Ake sijwayelane nohlu lwamakhompiyutha asebasha aseMelika athi "aqinisekise ukuthi" ubuthongo ubusuku.
Futhi sizoqala ngezigaba zakho eziyizintandokazi zohlobo. Uma sifuna ukubukela ama-comedes aseMelika mayelana nekolishi, uthando, sikhumbula ngokushesha i-movie "American Pie". Yaba ethandwa kakhulu, ngenxa yezici ezijwayelekile zezindaba kanye nezindaba zangempela.
Kuyathakazelisa kakhulu ukubuka amaqhawe enza isifungo sokulahlekelwa ubuntombi bawo kuze kube sesikoleni esiphakeme. Izilingo ezingenakukholwa zilindele intsha, futhi sizobabuka.
Izingxoxo zama-Witty kuleli filimu zanqoba ababukeli abaningi. Isibindi, ukubekezela, umusa, ukwethembeka - yilokhu okushiwo yi-heroine esemqoka kaTorrance (Kirsten Dunst). Kusukela umzuzwana eba yinhloko yeqembu lesikhungo sokusekela esikoleni, usezinkingeni eziningi. Ukuthuthukisa okuqhubekayo, ufunda ukuthi uqobo lwakhe uthathe inamba yabo yokwamukela kwelinye iqembu.
Uzoba yini umlingisi oyinhloko? Futhi yini ekulindeleke ekupheleni kwefilimu - uthando noma udumo?
"Izizathu eziyishumi zenzondo yami"
Ama-comedies abasha mayelana nothando nekolishi abakwazi ukucabangela ngaphandle kwale filimu. Wathandwa kakhulu, ngenxa yendaba yezindaba ezithakazelisayo kanye neskripthi esingcono. Kwakuzwakala ama-witticism namahlazo eminyaka eyishumi edlule. Ukuzivumelanisa mahhala komsebenzi kaShakespeare "Ukuklanywa kweSikhongo" kwavusa umxhwele phakathi kwabagxekayo, kodwa futhi nokuphumelela okukhulu kwesizukulwane esincane.
Le ndaba igxile kumfana ogama lakhe linguCameron, osukela intombazane uBianca. Kuzokwenzekani ekupheleni kwefilimu? Ingabe leli qhawe lizofeza injabulo yakhe?
«Kusuka ku-13 kuya ku-30»
Le filimu izoba yinto evelele ngaphansi kwesihloko esithi "Umncintiswano Wentsha mayelana nesikole, ekolishi kanye nothando", njengoba kuthakazelisa kakhulu ukulandela i-heroine yesithombe - uJenna, owodwa ovukile emzimbeni wesifazane oneminyaka engamashumi amathathu ubudala. Yiqiniso, ekuqaleni wayeyesaba futhi wamcasula. Kodwa ngenxa yalokho, lanikeza ithuba lokuqonda indlela yokuziphathamandla ngesikhathi sokukhula, ukuze ungazisoli ngaso sonke isikhathi.
Ifilimu "Kusuka ku-13 kuya ku-30" inhle kakhulu futhi iyamnandi. Ababukeli bayakujabulela ukubuka ukuthi i-heroine ivumelana kanjani nemvelo entsha futhi ishintsha inkambo yekusasa layo.
Enye indaba emnandi mayelana nomqondo wokuguqula umzimba. Abadali balolu comedy ngothando nangokolishi benza lokho okuhlukile ngokuhlukile: umlingisi oyinhloko owadlalwa nguLindsay Lohan, ekuseni ekuseni uvuka emzimbeni kamama wakhe, nonina, ngokulandelana, ngokubukeka kwakhe. Ukuphindukuzalwa kuka Mad kuzohlala kuze kube yilapho bekwazi ukubonisana ukuthi bangaphila ngokungenabugovu ngenxa yomunye umuntu injabulo.
Naphezu kokuthi isithombe sihloselwe kakhulu isizukulwane sesisakhula, sibonisa izinkinga ezinzulu njengokufa kwabazali, ukushada kabusha, ukuxhashazwa nothando. Babenomsebenzi obuhle kakhulu, ngakho-ke ufuna ukubuka le movie ngokuphindaphindiwe.
Uhlobo oluthi "intsha eluthandana ngothando nekolishi" ngo-2007 lwalugcwaliswa enye ifilimu ephawulekayo - "Superpertsy". Sekuvele igama lezithombe liheha. Futhi ngeke uphazamiseke uma ubheka indaba yabafana abathathu ababengabangane abakhulu kakhulu esikoleni esiphansi. Kodwa emva kokuba zamukelwe emakolishi ahlukene, ukuphila kwashintsha. Utshwala, umhawu, ukungabi naso kokuvikeleka kuthola amandla ebuhlobo babo.
Kubalulekile ukuthi emva kokubukela le ifilimu, uzoba nemibono emihle hhayi nje kuphela kumahlaya amahlaya namahlaya okuhlekisa, kodwa futhi kusukela esihlokweni esiyinhloko sithombe - naphezu kwakho konke, udinga ukugcina ubuhlobo obuhle.
Ukuncintisana kwentsha mayelana nothando nekolishi nakho akunakwenzeka ukucabanga ngaphandle kwe-movie ethi "Mean Girls". Ngokungangabazeki, lesi yisithombe esihle kakhulu esinomthelela omuhle ezinganeni. Akukona nje ukunikeza ithuba lokufunda izindlela eziningi ezihlakaniphile zokuxhumana komunye nomunye, kodwa nokuqonda okubalulekile empilweni.
Lena indaba mayelana nentombazane uKedi (Lindsay Lohan), owaqala ukufunda esikoleni esiphakeme ngemuva kokuvela e-Afrika, lapho ahlala khona ebuntwaneni bakhe bonke. Usheshe uthathwe ku-A-iqembu lamantombazane, emva kwalokho ubhekene nezinkinga ezihlukahlukene.
Abaningi babalingiswa kule ifilimu bakholelwa ukuthi umbukeli ngamunye angafunda kuzo ofunda nabo noma nabo ngokwabo.
"Iphrojekthi X: Yenziwe"
Ekuboneni kuqala, singasho ukuthi umbono wale filimu ulula: intsha ifuna ukuba neqembu ngokuhlonipha usuku lokuzalwa kwezinsuku eziyishumi nesikhombisa lomngane wabo uThomas. Intsha yayingathandwa kakhulu esikoleni, ngakho ayikwazi ukuqoqa nabo ekilasini. Nokho, ngenxa yezinye izenzakalo endlini, uTomas unabantu abaningi abafuna ukuphuma ngamandla. Njengoba behlulekile ukulawula isimo, abangani abazi ukuthi benzeni.
Yiqiniso, ngemuva kokubukela ibhayisikobho, ababukeli abaningi kumele baphethe ngokuthi lokhu akunakwenzeka. Kodwa namanje kumnandi futhi kuyathakazelisa ukubuka amaqhawe nama-storyline amakhulu.
Ama-comedies omusha mayelana nothando, ekolishi 2015-2016.
Futhi ekuphetheni, ake sikhulume ngemikhiqizo emisha eyashaqisa umhlaba!
Ifilimu "Umkhulu wezimfanelo ezilula", Yebo, kuzokwenza wonke umuntu amomotheka. Emva kwakho konke, amaqhinga omkhulu omkhulu, odlalwa nguRobert de Niro, ngeke ashiye noma ubani ongenandaba.
"I-simpleton" yindaba mayelana nentombazane eyayikwazi ukulahla isimo sayo esihlazo futhi inakekele kahle esikoleni.
"Umfana ongabonakali" uyindaba ehlekisayo ngomfana ongenakutholakali esikoleni nasekhaya. Akanayo izithakazelo, futhi zonke izinsuku ziyahamba ngokuzenzekelayo. Kodwa ngelinye ilanga uyaqaphela ukuthi uqala ukungabonakali.
"Ucwaningo lukaRazdolbayskaya" - ifilimu mayelana nomfundisi owesabekayo emhlabeni jikelele. Wayengabakhipha kanjani abafundi bakhe ekubambeni?
"Amaphekula Emkhawulweni" yindaba mayelana nomdansa-ntombazane oyozama ukunqoba umncintiswano ngokubambisana nomngani wakhe omusha, okuyinto enhle yokudlala i-violin. Yini ezoqeda imizamo yabo?
Abadlali abakhulu be-The Godfather, abafakwe emlandweni we-cinema
"Studio 17" - abalingisi bezindima zokuqala nezibili
I-melodrama yamahlaya. Uhlu lwamafilimu amahle
George Yumatov: biography, impilo yomuntu siqu, amafilimu
Fuagra inkukhu kwesibindi
Somogyi Syndrome noma syndrome ezingamahlalakhona insulin ukweqisa izidakamizwa (SKHPI): izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Nokho lapho iVolga uthululela?
"Vaz-Priora" entsha (2014 th ububanzi): Yiziphi izici?
Kuthiwani uma lapho uvula isikrini black
Umlobi uPiers Anthony: biography, izincwadi
Isitsha se-Toilet: izinzuzo nezinkinga, ukubuyekezwa
Indlela anakekele upholi kwesokudla?